Bahrain: Fanambarana ofisialy ny Andro Fisaonana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2011 13:21 GMT
Androany no manamarika ny andro faha-10 amin'ny tolona Andron'ny Hatezerana any Bahrain. Nanomboka tamin'ny Sabotsy lasa teo, ireo mpitolona tao amin'ny Fiodonana Lulu dia nitolona tamim-pilaminana, tsy nisy fifanandrinana tamin'ny mpitandro filaminana teny an-toerana.
Ali Ahmed Al-Muamin, mpianatra teratany Bahrain 22 taona maty tamin'ny fanafihan'ny mpitandro filaminana nandritra ny tolona. Sarin'ny mpampiasa Flickr Al Jazeera English.
Androany ny “Court Royale” dia nanambara fa ny Zoma 25 Febroary no ho andro fisaonana ireo maritiora maty nanomboka tamin'ny 14 Febroary. Izany dia nambara tamn'ny Twitter tamin'ny pejy Twiter an'ny Manam-pahefana momba ny raharaham-baovao.
@IAA_Bahrain FANAMBARANA MAFANA AVY AMIN'NY COURT ROYALE ANY #BAHRAIN: Zoma 25 Febroary dia nambara am-poahibemaso fa andron'ny fisaonana.
Ny sasany nankasitraka izany fihetsika izany noho izy nanaraka ny fanirian'ny Printsy Mitondra dia ny hsian'ny andro fisaonana, ary amin'ny maha-fihetsika tsara sy misy hevitra matotra mikasika ny fifampiraharahana, fa ny sasany kosa tsy afa-po.
@chanadbh Mankasitraka ny fihetsika: RT @IAA_Bahrain: FANAMBARANA MAFANA AVY AMIN'NY COURT ROYALE ANY #BAHRAIN: Zoma 25 Febroary dia nambara am-poahibemaso fa andron'ny fisaonana.
@NoorAlHaji Misaotra anao! RT @IAA_Bahrain: FANAMBARANA MAFANA AVY AMIN'NY COURT ROYALE ANY #BAHRAIN: Zoma 25 Febroary dia nambara am-poahibemaso fa andron'ny fisaonana.
@aalman81 Rahampitso 25 Febroary nno nambara apahibemaso fa andro fisaonana any #Bahrain araka ny zava-nitranga nandritra ny folo andro arany teo.
@alhejairy الديوان الملكي يعلن غداً يوم حداد على أرواح ضحايا البحرين – صدق من قال يقتل القتيل ويمشي في جنازته #Bahrain
Nambaran'ny “court Royale” fa rahampitso no andro fisaonana o an'ireo izay namoy ny ainy – Araka ny fiteny hoe “Vonoiny ireo lasibatra dia mizotra amin'ny fisaonana azy ireo izy” (Arabic proverb)
Manontany tena ny mpitoraka blaogy Mohammed Al-Maskati (@emoodz) raha midika ity fanambarana ity fa ireo tolona sy ny fankatoavana ireo maritiora lavo dia halefa amin'ny fahitalavi-panjakana, izay tsy nahavita nitatitra na dia iray tamin'ireo tolona tany amin'ny Fiodinana Pearl (Lulu) aza fa nifantoka tamin'ny fivondronam-be mpomba ny governemanta, natao tao amin'ny Fiobe Silamo Al-Fateh.
@emoodz Hahita ny sarin'ireo maritiorantsika amin'ny BTV ve isika rahampitso? #iwonder #bahrain #lulu
@emoodz Moa ve ny BTV handefa tantara, fanadihadiana ary hanaiky fa rariny ny tolona nahafaty ireo maritiora? #iwonder #bahrain #lulu
Hitohy araka ny efa nokasaina ireo diabe efa nalamina taloha amin'ny ‘Andro Fisaonana'…
@RedhaHaji Nanambara ireo “Demos” fa ny 25 Febroary no “Andro Fisaonana”. Ny diabe ho an'ireo maritiora dia hanomboka eo amin'ny Jiro fandrindrana fifamoivoizana eo Salmaniya hatrany #lulu #bahrain 3ora sy sasany hariva.
… ary ilay mpandefa tweet @SamehFoulad kosa dia manontany tena raha afaka hampiray ny Bahraini ity andro fisaonana ity amin'ny fanovana diabe miaraka manomboka eo amin'ny Fiodinana Pearl hatrany amin'ny “mosquée” Al-Fateh, toerana fitobian'ireo tolona momba ny demokrasia sy ireo tolona momba ny governemanta.
@SamehFoulad هل نتوقع غداً مسيرة موحدة حدادية على ارواح ابناء البحرين من دوار اللؤلؤ لمسجد الفاتح ؟
Afaka manantena diabe fisaonana miray ve isika manomboka eo amin'ny Fiodinana Pearl (Lulu) hatrany amin'ny “Mosquée” Al-Fateh?
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tattra manokana ataonay momba ny Tolona Bahrain 2011.